Manambara ny fisokafan'ny Resort bebe kokoa amin'ity volana ity ny Sandals Resorts
Home » Resort News » Manambara ny fisokafan'ny Resort bebe kokoa amin'ity volana ity ny Sandals Resorts
Oktobra 6, 2020
Fanamarihana ny tanjaka mitohy ho an'ny fizahan-tany Karaiba, Sandals Resorts International dia nanambara fa hampiditra fisokafana amina toeram-pivarotana efatra hafa mandritra ny volana Oktobra. Manomboka amin'ity herinandro ity, ny Sandals Grenada sy Sandals South Coast dia handray ireo mpitsidika amin'ny 1 Oktobra 2020. Manaraka ny dian'ity herinandro ity, hisokatra amin'ny fomba ofisialy ho an'ny vahiny ny Sandals Royal Plantation amin'ny 8 Oktobra, arahin'i Beaches Turks & Caicos amin'ny 14 Oktobra. miditra amin'izao fotoana izao nosokafana: Sandals Grande Antigua, Sandals Montego Bay, Sandals Royal Caribbean, Sandals Negril, Sandals Grande St. Lucian, ary Sandal Regency LaToc, Sandals Royal Barbados, ary Sandals Barbados no mitondra ny totalin'ny trano fandraisam-bahiny miisa 13 misokatra manerana an'i Karaiba .
Mba hiomanana amin'ny famolavolana, ny mpitarika lafo vidy rehetra dia nandany volana maro nanitatra ny fepetra momba ny fahasalamana sy fiarovana nateraky ny indostria satria ny mpikambana ao amin'ny ekipa avy lavitra sy lavitra dia nanomboka niara-niasa tamin'ny fandaminana stratejika. Fanofanana mahery vaika no narahina mba hampidirana ireo maodely milalao andraikitra sy hanampiana fotoam-panabeazana mba hiantohana ny zava-drehetra tsy misy fihoarana mihoatra ny fenitra rehefa namolavola drafitra marobe mba hitsenana ireo vahiny: ny vokatr'izany dia ny Protocols momba ny fahadiovana amin'ny Sandals Platinum.
"Raha misy ny lafy tsarany, ny fahitana ny endrik'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa sy ny fahasambaran'izy ireo hiverina hiasa," hoy i Gordon "Butch" Stewart, filohan'ny Sandals Resorts. “Tamin'ny fiandohan'ny taona, dia mora kokoa noho ny hatramin'izay ny fitsangatsanganana, ary amin'ny maha indostria anay dia nitatitra olona betsaka izahay. Na eo aza izany rehetra izany dia nanome toky izahay fa rehefa tonga ny fotoana hiverenany dia hiverina hatanjaka sy tsara kokoa noho ny teo aloha izahay. Faly izahay fa nitarika ny lalana ho lasa toeram-pialantsasatra voalohany hisokatra manerana an'i Karaiba ary manana ny fahaizana mizara ny kaontinay amin'ny hotely hafa ao amin'ny faritra. Miaraka amin'ny fisokafana bebe kokoa eo amin'ny faravodilanitra, ny fahatsinjovantsika fanantenana dia tsy mitsaha-mitombo ary tsy mitsaha-mitombo mandritra ny taona ho avy. ”
Ny mpikamban'ny ekipa sy ny sakaizany dia # BACKTOHAPPY
"Tsy afaka ny ho reharehan'ny ekipan'ny ekipa teto an-toerana aho," hoy i Adam Stewart, lefitra lefitry ny Sandals Resorts. “Mahatalanjona ny valin-kafatra renay tamin'ny vahiny, ary faly be ry zareo fa niverina nanao dia lavitra. Ny fahatokisan-tena nasehon'izy ireo, sy ny fandriam-pahalemana izay nomen'ny protokolay azy ireo hahatsapana ho voaro sy salama dia tsy voavidim-bola. Noho io antony io dia namorona teny kely izahay fa '#BackToHappy'. Tsy vitan'ny hoe faly miverina misokatra isika, fa faly manao izay tiana hatao indrindra, ary izany dia mahafaly ny vahininay. ”
Tsy hisokatra araka ny kasaina hatao ny 15 Oktobra ny fizahan-tany any Hawaii
Seychelles Manampahefana mamerina mijery ny toro-hevitra momba ny dia ataon'ny mpitsidika
Gloria Guevara dia nidina ho filoha & CEO WTTC